Author Topic: ကိုယ်တိုင်ရေး သရော်စာ (Read 70156 times)
« Reply #40 on: April 13, 2012, 01:37:59 PM »
mmcybermedia မှာ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ချက်တင်အကြောင်းသရော်စာလေး ဒီမှာပါ တင်လိုက်ပါတယ်။
ချက်တင်ထဲမှာ Q နေရင်းခံစားမိတာက ချက်တင်ထိုင်သောသူများ သူငယ်ပြန်ကုန်ကြသည်ဆိုတာလေးပါပဲ။ ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောရသလိုဖြစ်နေတယ်။ မယုံမရှိနဲ့ ဥပမာတွေနဲ့ကို သေချာရှင်းပြမယ်။ March လ အတွင်းမှာတင် ဖြစ်ခဲ့တာတွေ။ စပြီ။
ရန်ကုန်မှာ ၃-၄ ခါလောက် ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ ၃၀ ကျော်သင်္ဘောသားတစ်ယောက် ကျွန်တော်နေတဲ့ သင်္ကြန်အမြှောက်နိုင်ငံကို အလည်ရောက်နေတော့ သူနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်းရတယ်။ သူက "အဲဒီအချိန် တားတားအားဝူး" တဲ့။ ဘယ့်နှာပါလိမ့်။ ခင်ဗျားသူငယ်ပြန်တာ စောသားနော်လို့ ပြန်ပြောလိုက်ရင်လည်း စိတ်ကောက်ဦးမယ်။
ပြည်ပရောက်ကာစ မြန်မာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း Perth မှာ ကျောင်းတက်ခွင့်ရတဲ့ အတန်းဖေါ်ကောင်မလေးတစ်ယောက် ခုမှ FB ကို ပလူပြန်အောင်သုံးနေတာတွေ့တယ်။ ရန်ကုန်မှာတုန်းကတော့ ကွန်နက်ရှင်အကြောင်းပြပြီး FB ဆို သုံးစရာလို့တောင် မထင်တတ်တဲ့ ဒီမမရဲ့ Profile ကို အရင်က၀င်ကြည့်လိုက်ရင် သေများသွားပလားလို့ထင်ရအောင်ကို ခြောက်သွေ့နေခဲ့တာ။ ခုကျတော့လည်း အရက်သမား ထောင်ကလွတ်လာသလိုကိုဖြစ်လို့။ သူက လာအက်သွားတာနဲ့ သူ့ဂျီတော့လေး လှမ်းအက်ပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တာကို ပြန်ပြောတာက "ဘူများယဲချင့်" တဲ့။ ငါ့နှယ်။
အရင်ရည်းစားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ခင်ခဲ့တဲ့ အန်တီမီးမီးဆိုတာရှိတယ်။ သူ့သမီးလေး ဒီသင်္ကြန်အမြှောက်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းထားရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး စုံစမ်းဖို့ကျွန်တော့် mail လေးပေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော်သူ့ကို သွားအက်ပြီး စကားပြောလိုက်တယ်။ သူကဘယ်သူမှန်းမသိဘဲ အူလည်လည်နဲ့ပြန်မေးနေတာနဲ့ ကျွန်တော်ကိုမသိဘူးလား။ သေချာစဉ်းစားပါဦးဆိုပြီး စလိုက်တော့ အဲဒီကျွန်တော့်အမေအရွယ်ကြီးက ပြန်ပြောတာက "မီးကမသိတဲ့လူတွေနဲ့ဆို စကားမပြောဘူးနော်" တဲ့။ မြတ်စွာဘုရား။
ကဲ... ကျွန်တော် လူတွေနဲ့ အံမ၀င်တာ ကျွန်တော်မှားသလား... ပြော။
Don't drink alcohol without water.
Don't drink water without alcohol.
« Reply #41 on: April 29, 2012, 10:26:02 PM »
ကျနော်မပြောချင်လို့ ကြည့်နေတာကြာပြီ၊ ဒီကျောင်းထဲမှာ အိတ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင် ဟိုနေရာလဲ စပ်စပ်၊ ဒီနေရာလဲ စပ်စပ်နဲ့ နေရာတစ်ကာ လျှောက်ပါနေတာ၊ တွေ့ရာနေရာ စာတွေလျှောက်ရေး၊ ဟုတ်လေလား မဟုတ်လေလားမသိ၊ ဆော်ကြည်တာကလဲ အလွန်အမင်းဆိုပဲ၊ ရုပ်တည်နဲ့ ဖိန့်နေတာ ဖြစ်မယ်၊ ကျောင်းထဲမှာ နေရာလေးရလာတော့ မြောက်ကြွား မြောက်ကြွားနဲ့၊ ဟိုပိုစ်ကို ရွှေ့မယ်၊ ဒီပိုကို သိမ်းမယ်နဲ့ ကျောင်းသားသစ်တွေကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်သေးတာ၊ ကျောင်းသူသစ် ဝင်လာရင် ရှိမျှသွား ၂၈ ချောင်း(အံဆုံး ၄ ချောင်းက နှုတ်ထား၏)ကိုပေါ်အောင် ပါးစပ်ကို နားရွက်ချိတ်မတတ်ဖြဲလို့ ခေါ်တော တစ်သိန်းအားနဲ့ ကြောင်တော့တာ၊
ူဒါတောင် ကျောင်းသူတွေက သူအကြောင်းသိနေလို့ ပြန်မကြိုက်ရင် ရမ်းချင်သေး၊ ကျောင်သူတွေကလဲ သူ့ဆိုဘယ်ပြန်ကြိုက်မလဲ၊ လူက ပိန်ပိန် မဲခြောက်ခြောက်၊ ရုပ်က ဘိန်းစားကို ပေါင်ဒါမညီမညာ လိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာနဲ့၊ သူအနားကပ်လိုက်ရင် အပေါစား ဘော်ဒီစပရေးနံ့ကလဲ တစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ ခင်တဲ့လူတွေတွေ့ရင် ပိုက်ဆံချေး၊ တောအရက်ကို သောက်၊ ပြောတဲ့စကားက မိုးပေါ်ကမဆင်း၊ ဒယ်ဒီက အကောင်ကြီးဆိုပဲ(အကောင်ကြီးဆိုတော့ ဆင်တို့ ဝေလငါးတို့ ဖြစ်လောက်တယ်)၊ အလုပ်ဆိုလဲ ကမ္ဘာနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာတဲ့(အလုပ်ဆိုတဲ့ စာလေးကို အမ္ဘာမြေပုံပေါ်မှာ ကပ်ထားတာ ဖြစ်လောက်တယ်)၊ ပြောတော့က တစ်မျိ်ုး သောက်တာက လမ်းဘေးရေအိုးစင်၊ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ ၁၀၉-၁၁၀ ကျောင်းထဲမှာ တစ်နေ့ကို ၁၂ နာရီလောက်ရှိတာ၊
အဲလောက် ကျောင်းထဲမှာ ရှိနေမှတော့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပြီး ဘယ်ကပိုက်ဆံရလို့ ဘာနဲ့ထမင်းစားမတော့မလဲ၊ ကျောင်းအလုပ်ဆိုလဲ ဟိုနားပါ ဒီနားပါ၊ ခပ်စွာစွာရယ်၊ သူ့ဆို အပြင်မှာ ချောင်းရိုက်ချင်တဲ့သူတောင် ရှိသေးဆိုပဲ၊ ကျောင်းသား/သူတွေဆို သူ့ကို ရွံ့ကြလို့ ချက်ခန်းထဲမှာ စကားမပြောဘူး၊ သူကလဲ ချက်ခန်းထဲမှာ သူများတွေဆို မတူသလို မတန်သလို ဆက်ဆံတတ်တာ၊
တော်ပြီဗျာ၊ ဒီဘဲအကြောင်းပြောရင်နဲ့ စိတ်က ချဉ်လာပြီ၊ လူချင်းတွေ့ရင် ဖင်ကို ဆောင့်ကန်ပစ်ဦးမယ်၊ ပါးတွေ နားတွေ ဆွဲရိုက်ပစ်ဦးမယ်၊
« Reply #42 on: April 30, 2012, 09:54:42 AM »
ဟား ဟားး မမအိတ်ရယ်....ကောင်းလိုက်တဲ့ကိုယ်တိုင်ရေး သရော်စာ..... ပိုပြီး ပြီးး ပြည့် စုံသွားအောင် ဒီလိုလေးး ထပ်ဖြည့် လိုက်လေ...
အိတ်ကြီးကို မုန်းတီးနေသူ...အိတ်ကြီး အစားးး..... ဆီလိမ်းပြီး နှိပ် ယုံနဲ့3 ခါပြီးအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အိတ်ကြီးလို့ 
ခင်လို့ ဝင်စသွားသည် ။
ပုံ အိတ်ကြီး ညီ မ ဆက်ဆီ
« Last Edit: April 30, 2012, 09:57:25 AM by hotsexygirl »
« Reply #43 on: May 04, 2012, 09:57:04 AM »
ရှေ့က ဖြတ်သွားလို့ မျက်စလေးပစ်ပြရင် ..500 ... ပြုံးပြရင် ....1000.... ခင်ချင်ရင် ...1000 ... စကားတွေ တီတီတာတာလာပြောနေချင်ရင် ....2000 ...ပေးဆောင်ရမည်..........သို့သော်.. လာမည့်မိုးရာသီ အထူး promotion အနေဖြင့် .... ရည်းစားနှင့်ပြတ် အသဲကွဲသဖြင့် တိုင်ပင်လိုလျှင်... ရည်းစားစကားပြောလိုလျှင် free......
« Reply #44 on: July 14, 2012, 11:08:07 AM »
ပေါက်တတ်ကရ ၅၀ တောင်ရေးမြောက်ရေး ကိုမိုးစက်ပြန်လာချင်းအမှတ်တရ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်နီးပါးလောက်ကပေါ့ဗျာ………….အချစ်တက္ကသိုလ်မှာ အရမ်းခင်စရာကောင်းတဲ့ အက်မင် မိုးစက် ဆိုတာရှိသတဲ့။။။ သူဟာ တစ်နေ့ကြတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ သီချင်းဆိုချင်းအလုပ်ကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ချင်တာကြောင့် အက်မင်အဖွဲ့ကနေ အနားယူဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်……….ဒီလိုနဲ့မိုးစက်လေးဟာ သူဝါသနာပါတဲ့အတိုင်း သီချင်းများကို ပလုံစတီဒီယိုမှာ စတင်သွင်းကာ စီရီးများကို စတင်ထုတ်ပါတော့သတဲ့……သူရဲ့ပထမဆုံး စီးရီး နာမည်ကတော့ မိုးစက်နဲ့ error 403 ပါတဲ့…….
ဒီလိုနဲ့ မိုးစက်လေးဟာ သူမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း စီရီးပေါက်အားဟာ ထင်သလောက်မကောင်းဖြစ်လာပါတော့တယ်။။ ဒီတော့ စိတ်ဓါတ်ကြနေတဲ့ မိုးစက်လေးဟာ ကံကောင်းချင်တော့ ဇာတ်မင်းသားဟောင်းကြီး ဆိုင်းဆရာတစ်ဖြစ်လည်း စိန်ဂေါ်လီ၎လုံး ပန့်အခါတရာဆွဲ မီးသွေးနဲ့ သွားတွေ့ပါတော့တယ်။ မီးသွေးဆိုတာနယ်နယ်ရရ ဟုတ်ရိုးလား ၁မိနစ်အတွင်းမှာ အချက် ၈၀ဆောင့်နိုင်တယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေသူ တစ်ယောက်ပေါ့ကွယ်။။
ဒီလိုနဲ့ကံထလာတဲ့ မိုးစက်လေးဟာ မီးသွေးနဲ့ ပေါင်းပြီး ဇာတ်ထောင်ကြလေသတဲ့။။။။ မင်းသားလေးမိုးစက်ပေါ့ကွယ်။။။ အဲ့ဇာတ်မှာပဲ ဇာတ်ကားလိပ် ကားဆွဲ လုပ်တာကတော့ ဗလကြီးခေါ် ဂိဂိပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ဇာတ်ကြီးမှာ ဇာတ်မန်နေဂျာ နေရာလစ်လပ်နေတာကြောင့် ဦးဆိတ်ဖွား ဆိုတဲ့သူ က ၀င်လုပ်ပါသတဲ့။ ဦးဆိတ်ဖွားကတော့ အလွန်တရာမှ စိတ်ဆတ်သော လူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ဆတ် သလည်းဆိုတော့ မိန်းကလေးကလွဲရင် ကျန်တာကို ကြည့်မရပါဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ လူဖျောင့်စိတ်တိုကြီး ဦးဆိတ်ဖွား စနေဆိုင်းပညာရှင် မီးသွေး ဇာတ်မင်းသားလေး မိုးစက် နဲ့ ကားလိပ်တင် ကားလိပ်ချ ဂိဂိ တို့ဟာ ရိုးရိုးသားသားကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ဇာတ်များကိုဖျော်ဖြေ ကပြအသုံးတော်ခံကြပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်လာတဲ့ဇာတ်ကြီးကို ငွေကြေးနဲ့ ……….
မနက်ဖြန်ဆက်ရန် အပိုင်း၁ ပြီး၏
« Last Edit: July 14, 2012, 11:20:36 AM by zawye »
« Reply #45 on: August 03, 2012, 10:05:14 AM »
ဟိုအရင်တုန်းကတော့. ဆွမ်းအုပ်နီနီ အမေရွက်လို့ ..ပေါ့ဗျာ... အခုတော့ ခေတ်တွေပြောင်းလာတာနဲ့ 
ဇိုးလေးလိုက်မယ် ချန်မထားနဲ့ 
ကျောင်းကြီးပေါ်မှာ ဖိုးဝ ဆော့တော့
« Reply #46 on: August 03, 2012, 10:44:03 AM »
Quote from: tunaye2011 on August 03, 2012, 10:05:14 AM
ဦးထွန်း နဲ့ ကို ပုတု ချက် ခန်း ထဲ မှာစကား မပြော ပဲ ရပ်ရပ်သွားတာဝှစ်ပြီးတော့ကြူ နေတာကိုး
« Reply #47 on: August 03, 2012, 03:53:54 PM »
ဟိုတုန်းကတော့ ဘာ ဆိုလား ပေါ့ဗျာ ..
ခုတော့ ခေတ်တွေ ပြောင်းပြီး ဘာ ဆိုလား ဖြစ်သွားဘီ တဲ့ ..
ကျောင်းကြီးမှာကွယ် ဘာမထီ ဘူး.. တဲ့
မင်းတို့သန်တာ .. ငါ ပေါင်ကျိုးသလောက်
ဟတ်တွေ ထိပြီး မျော့မျော့ရယ် ..
အူးထွန်း ရယ် .. မိုက်လှတယ်..
« Last Edit: August 07, 2012, 10:36:05 AM by နိုးတူး »
« Reply #48 on: October 15, 2012, 11:42:40 AM »
« Reply #49 on: October 15, 2012, 12:19:59 PM »
အမလေး အမယ် မင်းရဲ့ ပြောရတော့မယ်.. (မျက်ရည် ကို လက်ဖမိုး ဖြင့်သုတ်ပြီး) ကိုဇော်ရဲ ရယ် နေမင်း အ သစ်လေး ပါ အလို ပြောလိုက်တာ ရင်ထဲကိုချိသွားတာ ပဲ ကိုဇော်ရယ် ဇာတ်လမ်း ကိုနည်းနည်းဆွဲ ပါအုံး ရောက်တာနဲ့ တန်းလုပ်ကြတော့တာ ပဲလား ........လည်ပရစေ ဘုရားလေးဘာလေးလဲ .......နောက်မှတက်ပေါ့ဇာတ်ရှိန် က ....အခု တော့ စမယ်မကြံသေးဘူး တက်နေပြီ (ဇာတ်ရှိန်ပြောပါတယ်) ကျောင်းသူတွေ ကားတင်ပြေးတာက ဟုတ်သေးတယ် ကိုဇော်ရိုးတို့ဆိုတော် ....မတွေးဝံ စရာပါပဲ ...နောက်ကြ ရင် ရင်နာနာနဲ့ ကိုဇော်တို့လောကထဲ ခြေစုံ ပစ်ဝင်လိုက်တော့မယ် (စိတ်နာနေသာလေသံ ဖြင့် ).....နောက်ပိုင်းဆက်ရန်ရှိသည်......
တက်သစ်စ လေး နေမင်းမောင်
« Last Edit: October 15, 2012, 12:32:02 PM by tunaye2011 »